Wararkii ugu dambeeyay Khasaaraha ka dhashay dagaalka Cadaado ka dhacay – STAR FM SOMALIA
Wararkii ugu dambeeyay Khasaaraha ka dhashay dagaalka Cadaado ka dhacay
Faah-faahin dheeraad ah aya aka soo baxeysa Khasaaraha ka dhashay dagaal ciidamo ka wada tirsan Millateriga Somaliya ku dhexmaray Magaalada Cadaado ee xarunta Maamulka Galmudug.
Dagaalkaan ayaa markii uu bilaabanaayay dadka waxa ay sheegayaan inuu u dhaxeeya ciidamo ka tirsan kuwa Galmudug iyo kuwa Millateriga, hayeeshe markii uu dagaalka istaagay ayaa la ogaaday ciidamada wada dagaalamay inay ka tirsan yihiin ciidanka Millateriga Somaliya.
Dagaalka ciidankaan dhexmaray ayaa wuxuu ka dhacay Xarunta Kafaalo oo Mushaar loogu qaybinaayay qaar ka tirsan ciidanka Millateriga halka ay soo weerareen ciidamo kale oo iyagana raadinaya Mushaaraad oo isla Millateriga ka tirsan.
Saddex Askari oo ka tirsan ciidamada Millateriga ayaa ku geeriyootay dagaalkaasi, halka ay ku dhaawacmeen Shan kale oo isla ciidamada Millateriga ka tirsan.
Dagaalka ayaa waxaa kala dhexgalay ciidamada Nabad Suggida Galmudug oo labada ciidan ee wada dagaalamay soo kala dhexgalay.
Masuuliyiinta Maamulka Galmudug iyo Saraakiisha ciidanka Xooga dalka Somaliyed qaybta 21-aad ayaa lagu wadaa goor dhaw inay Saxaafadda la hadlaan oo ay faah-faahiyaan sida ay wax u dhaceen.
Ciidamada Millateriga ka wada tirsan ee ku dagaalamay Magaalada Cadaado, ayaa sidan oo kale dhowr mar horay ugu dagaalamay Magaalada Cadaado.
Diyaarad Drone ah oo kusoo dhacday Gobalaka Shabeelaha Hoose
Dagaal ka dhacay Magaalada Cadaado ee gobalaka galgaduud